Real Madrid Oo Xaqiijisay Xiddiga Khadka Dhexe Ee Ay Lasoo Saxeexan Doonaan - Gool24.Net
Real Madrid Oo Xaqiijisay Xiddiga Khadka Dhexe Ee Ay Lasoo Saxeexan Doonaan
Real Madrid ayaa go’aan ka gaadhay xiddigaha ay saxeexyadooda u dhaqaaqi doonto marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaaga dambe, kaddib markii ay sannadkan aamusnaan ku jirtay oo aanay xataa hal saxeex samaynin.
Los Blancos ayaa lala xidhiidhinayay xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Manchester United ee Paul Pogba 18kii bilood ee ugu dambeeyey, waxaana xogtii ugu dambaysay ee dabka kusii shidda inuu tegayo Santiago Bernabeu ay soo baxday bishan markii uu kubbad-sameeyahani qirtay inuu doonayo inuu ka ciyaaro Real Madrid.
Laacibkan oo heshiiskiisa Old Trafford ay ka hadhsan yihiin wax ka yar 12 bilood, isla markaana diiddan inuu saxeexo heshiis uu ku kordhinayo waqtigiisa Manchester United ayaa ku jira liiska ciyaartoyda uu doonayo Zinedine Zidane, taas oo waliba ay ku rabaan inay si xor ah ula soo saxeexdaan.
Laakiin sida uu qoray wargeyska Diario AS iyo waliba Sport Witness, Zinedine ayaa mar horeba go’aan ka gaadhay sida uu noqonayo qorshihiisa suuqa ee xagaaga dambe, waxaanu kala dooranayaa Paul Pogba iyo Camavinga iyadoo uu waliba u janjeedo dhinaca 17 jirka kooxda Rennes ee xulka qaranka France kasoo dhex muuqday kulamadii ugu dambeeyey.
Haddii Real Madrid ay ku adkaato inay helaan Pogba oo ay Manchester United hirgeliso qodobkii ku jiray heshiiska ay kula jirto Pogba ee siinaya in sannad kale ay heshiiskiisa sii kordhin karto, isla markaana ay ka diiddo inay fasaxdo oo ay ku xidho lacag qaali ah, waxa uu go’aanka Real Madrid yahay inay lasoo saxeexato Camavinga.
Labadan wargeys ayaa waxa intaa ku dareen in gudaha Real Madrid laga ogyahay ciyaaryahannada lala soo saxeexanayo iyo qorshaha suuqa oo dhamaystiran.
Halka ugu muhiimsan ee Los Blancos ay iska dhisi doonto ayaa ah afka hore ee weerarka oo ay diiraddu u saaran tahay Kylian Mbappe iyo Erling Haaland, halka dhexdana ay haddaba miiskooda saaran yihiin magacyada Paul Pogba iyo Camavinga.